Labo Xildhibaan oo la xaqiijiyay in ay ku dhinteen Weerarkii lagu qaaday Hotelka Central+ Magacyadooda+Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Labo Xildhibaan oo la xaqiijiyay in ay ku dhinteen Weerarkii lagu qaaday Hotelka Central+ Magacyadooda+Sawiro
Wasaarada Amniga Qaranka Xukuumada Soomaaliya ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixisay weerar duhurnimadii maanta lagu qaaday Masjid ku dhax yaala Hotelka Central ee kuyaala Degmada Xamar Weyne.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Qaranka Maxamed Yuusuf oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Weerarkii maanta lagu qaaday Hotella Central ee Magaalada Muqdisho ay ka dhasheen Qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Maxamed Yuusuf, ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in ay Weerarkaasi ay ku dhinteen labo Xildhibaan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya kuwaa oo magacyadooda lagu kala sheegay Xildhibaan Cumar Cali Nuur (Cumar Furdug) iyo Xildhibaan Maxamed Ducaale Muuse(Xaaji Kafey) oo horey u badalay Xildhibaanad Saado Cali Warsame oo Muqdisho lagu dilay.
Weerarka waxaa sidoo kale ku dhintay ,Guddooomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka Siyaasadda Maxamed Aadan Guuleed (Caane Geel) , waxaa sidoo kale Weerarka ku dhintay Xubno Siyaasiyiin ah iyo dad kale oon wali la aqoonsan.
Warar kale oon heleyno ayaa sheegaya in Weerarka dadka ku dhintay ay ku jiraan xubno ka shaqeenayay Xafiiska Ra’izul Wasaaraha Soomaaliya , waxaana kamid ah nin la sheegay in uu la taliye u ahaa R/Wasaare kuxigeenka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdi fitaax Khaliif Badaiyow.
Waxaa sidoo kale jira in Weerarkan ay ku dhaawacmeen labo Wasiiro katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya kuwaa oo hada dhaawacyadooda la dhigay Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa wali socda baaritaano ay wadaan laamaha amaanka Dowlada Soomaaliya oo lagu tirakoobayo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Weerarka ismiidaaminta ah ee maanta lagu qaaday Hotelka Central ee Magaalada Muqdisho.
Weerarka ismiidaaminta oo ahaa labo ayaa la sheegay in mid kamid ah uu ahaa Qarax gaari oo ka dhax dhacay Gudaha Hotelka halka qaraxa kale la sheegay in uu ahaa mid ay is qarxisay haweeney hotelka iridiisa joogtay.